About Us - Qingdao Haokun milina Co., Ltd
Qingdao Haokun Heavy milina Teknolojia Co., Ltd dia orinasa izay incorporates famolavolana, orinasa mpamokatra entana, sy ny fahavitan'ny fitaovana ho an'ny mpampatsiro hanina, vy Rolling, fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tena ahitana vokatra Imahitsy Seam Welding Sodina Mill (na ERW), miolakolaka Welding Sodina Mill, Longitudinal manety Production-dalana, Edge mihaohao Machine sy ireo mpanampy ny fitaovana, toy ny Hydrostatic Testing Machine sy mpitsoka sodina rehetra Mifarana Beveling Machine.
Ny orinasa no misy ao amin'ny Toerana mahafinaritra Jiulong Industrial Town Park ny Jiaozhou City of Qingdao tao Shandong Province, Sina, izay ny vato hiala HuangDao boaty Terminal, ny lehibe indrindra fitoeran-javatra Terminal any Avaratra Shina. Ny fitaterana mety mitondra tena tsara ny handray ny fanondranana fitaovana mavesatra. Ankoatra izany, ny orinasa dia mifanakaiky amin'ny lalambe maro tambajotra, ary Jiaozhouwan Highway amin'ny atsimo, izay tsy isalasalana fa mitondra fitaovana lehibe fitaterana tsy hanahirana ho an'ny ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina mpanjifa.
Ny dingana voalohany amin'ny fanorenana ny zavamaniry maka ny toerana tokony ho 43900 metatra toradroa, amin'ny fananana tanteraka ny 89million Yuan (manodidina ny 13million USD). Ny orinasa manana manam-pahaizana ambony-ambony any Shina amin'ny sodina tsipika famokarana, tsara endrika sy ny fitantanana talenta, ary 39 136 mechanicians kafa teknisianina ny ambaratonga sy ny ambony. Tamin'ny faran'ny taona 2009, Haokun haka ny metatra toradroa 60000 iray hafa noho ny drafitry ny faharoa-dingana fanorenana ho toy ny fanitarana, izay ahitana ny R & D Center sy sodina andalana orinasa mpamokatra entana fototra. Mianatra avy amin'ny hafa wildly orinasa, dia foana fanavaozana amin'ny alalan'ny hay fantarina fampandrosoana ny dingana efa mandroso sy ny teknolojia avy amin'ny orinasa vahiny, ary handinika amin'ny fomba manan-danja fanao an-tokantrano. Hatreto maro ampitan-dranomasina mpanjifa-pandoanao fitsidihana-toerana ho amin'ny fikarohana, ny fampiasam-bola ny fiaraha-miasa.
Nandritra ny taona lasa nanomboka tamin'ny fananganana ny orinasa, dia efa nanome an'i Zhejiang Huzhou Jiuli Group, Baoji Petroleum Steel Sodina Co., Ltd, Shanghai BSW Petro-Sodina Co., Ltd ary Singapore Fengyu Private Company, amin'ny Hydrotester ny 1200 taonina, 2000 taonina ary 2800 taonina tsirairay avy, sy mpitsoka sodina rehetra vazan Beveling Machines ny Φ1620mm, Φ820mm, Φ2540mm, miaraka amin'ny fepetra arahana isan-karazany. Toy izany koa ny fotoana, maro avo-kilasy vy sy ny lehibe savaivony welding-sodina fikosoham-bary no voavoatra sy nataony an-miasa, eo izay roa ERW24 '' mahitsy seam welding sodina fikosoham-bary ny lehibe indrindra savaivony ao an-trano Shina for Liaoyang Large Sodina Company ary Guangzhou Juyi Steel Sodina Co., Ltd; miolakolaka telo Welding Sodina Mills amin'ny vy avo kilasy ny X80 andΦ1422mm for Yangzhou Tongya Steel Sodina CP., Ltd sy Petroliam Berhad Nasional (Petronas). Hatreto ny omby dimam-vondrona ho amin'ny mpitarika ao an-toerana na sehatra sy any amin'ny faritra atsimon'i ary ny faritra andrefan'i Azia.
Haokun Company dia foana nihazona ny raharaha filozofia ny "Quality Voalohany ka nitoetra ny Contract, Customer Orientation sy Excellent Service", ary amin'ny fo manontolo manome na ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina mpanjifa amin'ny asa toy ny vahaolana ho mafy-bazana ny olana eo amin'ny siansa sy ny teknolojia, anaty baoritra famolavolana, fanodinana sy ny orinasa mpamokatra entana, fametrahana sy ny fitsapana, ny teknolojia sy ny famindrana teknolojia Consulting, ao amin'ny faritra ny mpampatsiro hanina, vy Rolling, fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Haokun Company no ho foana, ary hanolo-tena ny customization, internationalization sy ny faharetan'ny tsara welding sodina mpanamboatra. Ny hany tanjona dia ny ho voalohany dia ambany noho orinasa!